Tesalonikafo Nhoma a Edi Kan 3:1-13
Paul twɛn brɛe wɔ Atene (1-5)
Timoteo amanneɛbɔ no ma wonyaa awerɛkyekye (6-10)
Wɔbɔɔ mpae maa Tesalonikafo (11-13)
3 Enti bere a yɛantumi antwɛn bio no, yehui sɛ eye sɛ yɛn nko ara yɛbɛtena Atene;+ 2 na yɛsomaa Timoteo+ a ɔyɛ yɛn nua ne Onyankopɔn somfo* wɔ Kristo ho asɛmpa mu no, sɛ ɔmmɛhyɛ mo den* na ɔnkyekye mo werɛ mma mo gyidi nyɛ den, 3 sɛnea ɛbɛyɛ a amanehunu yi remma obiara nhinhim. Na mo ankasa munim sɛ yɛrentumi nguan saa amanehunu no.*+ 4 Efisɛ bere a yɛwɔ mo nkyɛn no, na yɛtaa ka kyerɛ mo sɛ amanehunu bɛto yɛn, na sɛnea munim no, ɛno ara na aba mu no.+ 5 Ɛno nti na bere a mantumi antwɛn bio no, mesomaa Timoteo sɛ ɔmmɛhwɛ sɛ moda so redi nokware,+ anaasɛ ebia Ɔsɔhwɛfo*+ no asɔ mo ahwɛ ama yɛn adwumaden no ayɛ ɔkwa. 6 Afei ara na Timoteo afi mo hɔ aba yɛn nkyɛn.+ Wabɛka mo nokwaredi ne mo dɔ ho asɛmpa akyerɛ yɛn, na wama yɛahu sɛ daa mokae yɛn paa, na mo ani agyina sɛ mubehu yɛn, sɛnea yɛn nso yɛn ani agyina sɛ yebehu mo no. 7 Ɛno nti, anuanom, bere a yɛtee mo nka ne nokware a moredi no, ama yɛanya awerɛkyekye wɔ yɛn ahokyere ne yɛn amanehunu nyinaa mu.+ 8 Efisɛ sɛ mugyina pintinn wɔ Awurade mu a, yenya ahoɔden.* 9 Sɛ yɛhwɛ anigye kɛse a mo nti yɛanya wɔ Onyankopɔn anim yi a, yenhu aseda a yɛmfa mma Onyankopɔn mpo. 10 Awia ne anadwo, yɛsrɛ denneennen sɛ yebehu mo anim, na baabi a mo gyidi tɔ sin no, yɛahyɛ no ma.+ 11 Yɛn Nyankopɔn ne yɛn Agya no ankasa, ne yɛn Awurade Yesu mmue kwan mma yɛn, na yentumi mmra mo nkyɛn. 12 Bio nso, Awurade mma mo dɔ mmoro so, yiw, ɔmma munnya ɔdɔ pii mma mo ho+ ne obiara, sɛnea yɛn nso yɛwɔ bi ma mo no, 13 sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛma mo koma asi pi, na ayɛ kronkron a asɛm biara nni ho wɔ yɛn Nyankopɔn ne yɛn Agya anim,+ bere a yɛn Awurade Yesu aba+ a n’akronkronfo nyinaa ka ne ho no.
^ Ebetumi nso akyerɛ, “obi a ɔne Onyankopɔn yɛ adwuma.”
^ Anaa “ɔmma mo ase ntim.”
^ Anaa “munim sɛ ɛsɛ sɛ yehyia saa amanehunu no.”
^ Nt., “yenya nkwa.”